संसदीय समितिमा सांसदबीच विवाद, कारक- ऋषि धमला! – Hamrosandesh.com
संसदीय समितिमा सांसदबीच विवाद, कारक- ऋषि धमला!
नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सांसदहरु एक आपसमै भिडे। भिड्नुको कारक बने – पत्रकार ऋषि धमला।
पत्रकार धमला रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष हुन्। उनै धमलाले विभिन्न कार्यक्रमका लागि गरेका कुराकानीले सोमबारको संसदीय समिति ततायो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र कांग्रेस सांसद सुजाता कोइरालाले ऋषि धमलाको प्रसङ्ग उप्काए। तर दुवै प्रसङ्गमा उनीहरुले सांसदको प्रतिवाद सामना गर्नुपर्‍यो।
नेकपाका सांसद भीम रावलले भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई ऋषि धमलाको कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीलाई लिएर र्‍याखर्‍याख्ती पारे। त्यस्तै कांग्रेस सांसद सुजाता कोराइलाले ऋषि धमलासँग गरेको टिप्पणीको समितिमा स्पष्टिकरण दिनुपर्‍यो। कोइरालाले स्पष्टिकरण दिएपनि नेकपाका सांसद मोहन बाँनियाले समिति बैठकमा उनको प्रतिवाद गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबारको बैठकमै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई डाकेको थियो। तर उनी उपस्थित भइनन्। सोमबार ढिला गरी बैठकमा पुगेकी मन्त्री अर्यालको जब बोल्ने पालो आयो।
नेकपाका नेता भीम रावलले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलसँग समय माग्दै भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिले पनि थिएन भनेर’ बताएको प्रसङ्गमा स्पष्टिकरण मागे।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले आफूले ऋषि धमलासँगको कुराकानीको प्रसङ्ग उप्काउँदै रावलको प्रतिवाद गरिन्। ‘ल्याण्डलाइन नंम्बरबाट फोन आएपछि हातको मोबाइल उठाएँ’, अर्यालले भनिन्, ‘फोन गर्नेले ऋषि धमलाले कुरा गर्न चाहनु भएको छ भने, केही कुरा होला भनेको त मन्त्रीज्यू जनता जान्न चहान्छन्, तपाँईलाई यो प्रश्न भनेर भन्नुभयो।’
उनले रावलमाथि अतिरञ्जनाको आरोप लगाइन्। ‘एउटा शब्द टिपेर यसो गरियो भनेर अतिरञ्जना गर्नुको अर्थ छैन’, अर्यालको भनाइ थियो। ‘मैले कहिल्यै पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन,’ अर्यालले भनिन्, ‘अहिले प्रचलनमा रहेको ३२ सालको नक्सा हो। त्यो नक्सामा छैन। यो तितो सत्य हो। मैले नचाहेर पनि दुनियाँको अगाडि यो तितो सत्य विषय हो। यस्ता विषय उचालिरहनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।’
मन्त्री अर्यालले बोलेलगत्तै रावलले प्रतिवाद गरे। ‘यो अतिरञ्जना होइन’, रावलले भने, ‘म जबरजस्ती गर्न चाहान्न। अनुमति पाए म रेकर्ड बजाउन चाहान्छु। म किन अतिरञ्जना गर्छु। उहाँ मेरो पार्टीको मन्त्री हो। एक जना मन्त्रीले इतिहासमा लिम्पियाधुरा जस्तो ठाउँ नेपालको नक्सामा छैन भनेर बोलेको कुरा भोलि सरकारलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भनेर हो। म उहाँको रेकर्ड सस्वर सुनाउन चाहान्छु।’
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले हस्तक्षेप गरेपछि रावल रोकिए। त्यसो त नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत पद्मा अर्याललाई आफूले नबोलेको कुरा सञ्चार माध्यममा आए तत्काल खण्डन गर्न सुझाए।
‘मन्त्रीको अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ। दुई सय वर्षदेखि के के भनेर’, नेता नेपालले भने, ‘यस्ता विवादास्पद कुरा नबोलौँ। गलत आएको भए खण्डन गरौँ। होइन भने अनाधिकृत रुपमा यस्तो कुरा बोल्ने, जटिलतामा फस्ने र सरकारलाई बदनाम गर्ने काम नहोस्।’
त्यस्तै ऋषि धमलाको अर्को प्रसङ्ग भने कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले उप्काइन्। उनले आफूले ६ महिना अघि ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा कालापानी लिजमा भारतलाई दिन सकिने धारणा राखिएकोमा अतिरञ्जना गरिएको बताइन्।
‘मैले लिजमा दिउँ भनेको हो। कन्ट्री बेचिदिउँ भनेको होइन’, कोइरालाले भनिन्, ‘ एउटा उपाय सुझाएको हो। अब त लिजको कुरा छैन।’ उनले बरु बंगलादेशसम्म पुग्ने गरी नेगोशिसएन गरेर भारतसँग एक्सचेन्ज गर्न सकिने बताइन्।
कोइराला बोलेलगत्तै नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले उनको प्रतिवाद गरे। ‘मैले सुजाता कोइरालाले राखेको कुरा बुझ्न सकेको। भारतले कालापानी मात्र होइन लिपु भञ्जयाङ यता १२ किलोमिटर नेपालको सीमा स्वीकारेको छैन’, बानियाँले भने, ‘अनि कसरी लिजमा दिने कुरा हुन्छ? यस्तो खालको कुरा लम्पसरवादी कुरा हो।’
सांसदहरु विवादमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले पहिला नेपालको त्यस क्षेत्रमा अधिकार स्थापित हुनुपर्ने बताए।
‘त्यसका प्रयोगका मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘पहिला नै मोडालिटी छलफल गर्न सकिन्न जबसम्म अधिकार स्थापित हुन्न। त्यसअघि नै मोडालिटी छलफलले हाम्रो प्रयास कमजोर हुन्छ।’ सेतो पाटी बाट